International Mhuri Hofisi varairidzi muNetherlands - Law & More
Pakati pevatengi vedu pane veDutch uye vekunze vemabhizinesi emhuri, izvo zvasvika pakubudirira zvakanyanya mumaindasitiri avo. Mhuri dzakadaro kazhinji dzakatogadzira uye dzakasimbisa, kana dziri kuronga kuita kudaro, yeDutch imwe chete kana akawanda-mhuri hofisi yemhuri kuronga zviitiko zvavo uye mari nenzira yakajeka uye inokwanisa kurongeka.
CHIKAMU CHEMA ROKUTI RWEMHURI?
Law & More inobatsira vatengi uye hofisi dzemhuri neyakaenderana nemutemo masevhisi Isu tinosanganisa ruzivo uye ruzivo rwedu seDutch vakazvimirira vatengi magweta uye vateresi vemitero munzvimbo dzeDutch mutero uye kuronga dzimba, danho reDutch, dzimba dzezvivakwa zveDutch uye zvinotevera bhizinesi. Rubatsiro rwakadai rwunopihwa kuburikidza nekudyidzana nenyanzvi mukutungamira kwekudyara, kuronga zvemari uye accounting izvo kazhinji kazhinji zvinobatsira mhuri chaiyo. Ruzivo rwedu runobva pazvinhu zvine chekuita nemahofisi emhuri, hutongi hwemhuri, kutevedzana nekugadziriswa kwekunetsana muNetherlands.
Isu tinobatsirana nevamazvikokota mune hukama hwakanangana nehunyanzvi watinobatana navo kuedza kwedu kupa nzira yakabatana kune dzakasiyana siyana dzemutemo uye zvisiri pamutemo, zvinosangana nemhuri dzeDutch nedzepasi rose nemahofisi avo.
Isu tinobatsira vatengi mukutanga mahofisi emhuri muNetherlands. Isu tinoenderera mberi tichishanda nemahofisi emhuri epasi rese pamabasa epamusoro ekugadziridza epasi rose emhuri uye mabhizinesi. Pakupedzisira tinoongorora mashandiro uye chimiro chemahofisi emhuri akagadzwa, ayo anotsvaga zano rekuwedzera nekuvandudza huwandu hwemasevhisi akapihwa.